एमटियुको बिधान संसोधन र २०१८ का मुख्य कार्य योजनाहरु। - dsnews
एमटियुको बिधान संसोधन र २०१८ का मुख्य कार्य योजनाहरु।
संसोधन को लागि साधारण सभा मा पेस:-
दफा १५ (सदस्य शुल्क ) सदस्यले सदस्य शुल्क बुझाउनु उसको कर्तब्य हुनेछ।
(१)सदस्य शुल्क महिनाको ५००० हजार हुनेछ । सदस्य शुल्क प्रत्यक महिनाको अन्तिमसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ
(२)सदस्य शुल्क नबुझाएको खण्डमा सदस्यबाट हटाइने वा सजाय दिइनेछ। साथै विधानमा भएको अधिकारहरु प्रयोग गर्ने अधिकार कटौती हुनेछ ।
दफा १५ (सदस्य शुल्क ) सदस्यले सदस्य शुल्क बुझाउनु उसको कर्तब्य हुनेछ ।
(१)सदस्य शुल्क १०,००० वोन हुनेछ । सदस्य शुल्क प्रत्यक महिनाको अन्तिमसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२)सदस्य शुल्क नबुझाएको खण्डमा सदस्यबाट हटाइने वा सजाय दिइनेछ। साथै विधानमा भएको अधिकारहरु प्रयोग गर्ने अधिकार कटौती हुनेछ
संसोधन को लागि पेस:-
दफा १० (संगठन) एमटियुको सउल,इन्छन , दक्षिण ख्यंगी , मध्य ख्यंगी ,उत्तर ख्यंगी शाखाहरु हुनेछ । शाखाको मातहतको प्रत्यक क्षेत्रमा, कम्पनीमा उप शाखा गठन गर्न सकिनेछ । तर विधानमा तोकिएको प्रत्यक क्षेत्रमा भएको शाखा बाहेक अन्य क्षेत्रमा शाखा गठन गर्ने आवश्यक परेमा साधारण सभा वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी गठन गर्न सकिनेछ । साथै शाखा गठन गर्नकोलागि आवश्यक शर्त पुरा नभएको क्षेत्रको बारेमा शाखा गठन तयारी समिति (संयोजक समिति) रहनेछ ।
दफा १० (संगठन) संगठनको मातहतमा क्षेत्र अनुसार शाखाहरु गठन गर्न सकिनेछ। क्षेत्रको मातहतमा क्षेत्र अनुसार शाखा र कम्पनीमा उपशाखा गठन गरिने छ । तर आवश्यक परेको अवस्थामा आउदो दिनमा अधिराज्य भरि शाखा विस्तार गर्न सकिने छ । शाखा गठन गर्नकोलागि शर्त पुरा नभएको क्षेत्रमा शाखा गठन तयारी समिति (संयोजक समिति) रहनेछ ।
संसोधन का लागि पेस:-
हामी कोरियामा बिभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रवासी मजदुर हौ । हाम्रो श्रम को निश्चित रुपमा कोरियन समाजको बिकाश का साथै विश्वको एतिहासिक प्रगतिमा ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा बुझनु पर्ने हुन्छ । हामी म्यदोंग संग्दांग (गिर्जाघर)मा शंघर्ष गर्ने मित्रहरुको शंघर्ष र सोचाई सफल बनाउदै प्रवासी मजदुरको स्वतन्त्र रुपमा संगठित हुने ,मजदुर संगठनको गतिविधिको निरन्तर प्रगतिकोलागि जोड दिदै प्रवासी मजदुरको काम गर्ने स्थिति(Working condition)मा सुधार गरेर आर्थिक ,समाजिक ,सास्कृतिक स्तर उच्च बनाउन साथै प्रवासी मजदुरको सास्कृतिक बिबिधताको सम्मान गर्दै स्वतन्त्रता ,प्रजातन्त्र र शान्तिकोलागि “सउल ख्यंगी इन्छन प्रवासी मजदुर संगठन” गठन गरिएको हो ।
अध्याय १ पुरा नियम –
धारा १ (नाम) यो मजदुर संगठनको नाम “सउल खयंगी इन्छन प्रवासी मजदुर संगठन ” रहनेछ ।अंग्रेजीमा Seoul Gyeounggi.Incheon Migran Trade Union भनिने छ । छोटकरीमा SGI-MTU रहनेछ ।
हामी कोरियामा बिभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रवासी मजदुर हौ । हाम्रो श्रम को निश्चित रुपमा कोरियन समाजको बिकाश साथै विश्वको एतिहासिक प्रगतिमा ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा बुझनु पर्ने हुन्छ । हामी म्यदोंग संग्दांग (गिर्जाघर)मा शंघर्ष गर्ने मित्रहरुको शघर्ष र सोचाई सफल बनाउदै प्रवासी मजदुरको स्वतन्त्र रुपमा संगठित हुने ,मजदुर संगठनको गतिविधिको निरन्तर प्रगतिकोलागि जोड दिदै प्रवासी मजदुरको काम गर्ने स्थिति(Working condition)मा सुधार गरेर आर्थिक ,समाजिक ,सास्कृतिक स्तर उच्च बनाउन साथै प्रवासी मजदुरको सास्कृतिक बिबिधताको सम्मान गर्दै स्वतन्त्रता ,प्रजातन्त्र र शान्तिकोलागि “सउल ख्यंगी इन्छन प्रवासी मजदुर संगठन” गठन गरिएको हो
धारा १ (नाम) यो मजदुर संगठनको नाम “प्रवासी मजदुर संगठन” रहनेछ ।अंग्रजीमा Migrant Trade Union भनिने छ छोटकरीमा MTU भनिनेछ ।
नोट:- माथी प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावना माथी साधारण सभा मा गहन छलफल पस्च्यात बहुमत द्वारा संसोधन गरिका हुन।
एमटियु २०१८ का कार्य योजनाहरु:-
एमटियु साधारण सभा पेस गरिए का निम्न कार्ययोजना माथि छलफल गरि पारित गरिएका छन।
(१) ब्यबथापन (कार्यालय लगायत)
(क) एमटियुको गतिबिधिको वास्तविक अवस्थाको अभिलेख राख्ने
– एमटियुको साधारणतया सधै गरिने गतिविधिको अभिलेख र अवस्था जम्मा गर्ने ।
(ख)एमटियुको होमपेज बनाउने
– पहिलो ६ महिनामा होमपेज बनाउनकोलागि (बिग्रिएको) सहयोग गर्ने
(ग)पदाधिकारी, सदस्यको भिषा पाउनकोलागि उपायहरु खोज्ने ।
– एमटियुको सदस्य मध्ये कुनै सदस्य कार्यालयमा काम गर्न चाहन्छ भने शुरक्षित रुपमा बसोबास गर्नकोलागि कसरी भिषा पाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा सरकारसग छलफल गर्ने ।
(घ)अधिराज्यको बिभिन्न क्षेत्रमा शाखा गठन – सउल ख्यंगी क्षेत्रमा भएको शाखा समेत गरी अधिराज्य भरि शाखा बिस्तार गर्न र शाखा संचालन गर्न योजना तयार गर्ने ।
(ड.) सदस्य बृद्दी गर्ने सउल ख्यंगी क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी सदस्य बनाउने ।
(च)नियमित रुपमा शाखाको बैठक बस्ने
– प्रत्यक क्षेत्रको अध्यक्षहरु सहभागी हुने बृहत कार्यसमितिको बैठक बस्ने र संयुक्त रुपम क्षेत्रमा रेल्ली गर्ने ।
(छ) सरकारलाई दबाब दिन गतिबिधि जारी राख्ने ।
– मुख्य माग पुरा गराउन संसद ,श्रम बिभाग अगाडी एकल प्रदर्शन लगायतको शंघर्ष गर्ने ।
(ज) अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध (एक्यबद्धता) बढाउने
– अन्तरास्ट्रिय बैठक वा एक्यबद्ध हुने गतिबिधिमा सहभागीता बढाउने ।
(झ) प्रवासी मजदुरलाई कोरियामा आएर शुरुमा दिने शैक्षिक कार्यक्रममा एमटियुले मजदुर संगठनकोगतिबिधि र मजदुर अधिकारको बारेमा शिक्षा दिन भाग लिन पाउने
– कोरिया आए पछी ३ दिन दिने शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुनकोलागि श्रम मन्त्रालय र एचआरडी संग माग गर्ने त्यसकोलागि बार्ता गर्ने योजना
(ञ) आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने गाडीको ब्यबस्था गर्ने ।
– सहयोगदाता बृद्दि गर्ने , सदस्य शुल्क बृद्दि गरि नियमित आर्थिक आयको ब्यबस्था गर्ने ।
– क्षेत्रमा गरिने रेल्ली ,शैक्षिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्नकोलागि गाडीको ब्यबस्था गर्ने ।
(ट) छोटो समय, मध्ये र बार्षिक प्रगतिको उपायहरु खोज्ने ।
(ठ)एमटियुको गतिबिधि र मुख्य समस्याको बारेमा प्रचार प्रसार तिब्र गर्ने ।
(ड) सदस्यको सुची सच्याउने ।
– सीएमएस ,फोन न ठेगाना ,डाटा सुधार गर्ने (अपडेट)
(२) संगठित गर्ने योजना
(क) सदस्य बृद्दि
– महिनाको १ पटक इन्छन एरपोर्टमा नवआगन्तुक प्रवासी मजदुरहरुलाई मजदुर संगठनको बारेमा नियमित प्रचार प्रसार गर्ने ।
(ख) प्रचारप्रसारमा जोड दिने
– मजदुर संगठनले मुख्य जोड दिनु पर्ने बिषय (इस्यु)को बारेमा समाचार पत्र , एसएनएस ,कार्ट न्युज बनाई बितरण गर्ने ।
– कार्यालयमा आउने सदस्यलाई दिने पर्चा र किताब छापेर दिने
– नया सदस्यलाई मजदुर संगठनको गतिविधिको बारेमा शिक्षा दिने ।
(घ) कार्यकर्ता र पदाधिकारीलाई शिक्षा दिने ।
एमटियु सानो नियमित सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने –
– प्रवासी मजदुर सास्कृतिक फेस्टिवल संयुक्त रुपमा तयारी गरि संचालन गर्ने
– क्षेत्रमा गएर गर्ने रेल्लीको कार्यक्रमको बिषयलाई प्रभाबकारी बनाउने ।
(च) सदस्यको नियन्त्रण र परामर्श दिने
– कार्यालयमा आउने सदस्य माथी गरिने ब्यबहारमा सुधार गर्ने
कार्यालयको बिभिन्न बाताबरणमा सुधार गर्ने ।
(३) सघर्ष र गतिबिधि
(क) बर्ष भरिनै बिना भिषा काम गरिरहेको मजदुरलाई गरिने धरपकड गरिने अवधिमा धरपकड गर्न नदिन बिभिन्न संघर्षको गतिबिधि गर्ने ।
(ख)प्रवासी मजदुरको हक अधिकार सुनिस्चित हुने नीति(डब्लुपिएस) बनाउनकोलागि माग गर्ने ।
(ग) रंगभेद ,मुस्लिमलाई गरिने दमन र जातीय भेदभावको बिरुद्दमा गतिबिधि गर्ने ।
(घ)कृषि क्षेत्रको मजदुरको अधिकार सुनिस्चित गर्ने क्याम्पेन र संघर्षको गतिबिधि गर्ने ।
(ड.)हप्ताको अन्तिम दिन बिभिन्न क्षेत्रमा गएर संघर्ष गर्ने बिषयलाई लिएर अनुसन्धान गर्ने , परामर्श दिने लिने ।
(च) प्रत्येक ३ महिनामा प्रवासी मजदुर बढी भएको क्षेत्रमा रेल्ली गर्ने ।
(छ)प्रवासी मजदुरले भोगेको समस्याको विवरण तयार गर्ने ,यसबारे प्रचार गर्ने ।
(ज) रोजगार केन्द्रमा प्रवासी मजदुरले समस्या लिएर जादा कर्मचारीले गर्ने ब्यबहारको बारेमा निगरानी गर्ने (रोजगार केन्दमा गएर महिनाको १ पटक )
(क) मजदुर संगठन, सामाजिक संगठनको केन्द्रिकृत रेल्ली ,नियमित सास्कृतिक कार्यक्रम ,सहयोग साझमा नियमित सहभागी हुने ।
(ख) संघर्ष गरिरहेको कार्यस्थलको धर्नामा जाने र समर्थन गर्ने।
(ग) सबै देशको कार्यकता बृद्दि गर्नकोलागि बिभिन्न देशको संस्थासग बैठक बसी छलफल गर्ने कार्य शुरु गर्ने ।
(घ) रेल्लीमा नियमित सहयोग गर्ने बिद्यार्थी कार्यकर्ता बृद्दि गर्ने ।
(ड.)मिडियाको गतिविधिको निरिक्षण गर्ने समुह संचालन गर्ने ।
– कार्यकर्तालाई शिक्षा दिन शुरु गरिने छ ।
– इपिएस कानुन ,अध्यायगमन कानुन लगायत प्रवासी मजदुरसग सम्बन्धित कानुन र नीतिको बारेमा शिक्षा दिने ।
– सदस्यहरुलाई सकृय बनाउन रेल्ली वा अन्य गतिविधिको भिडियो बनाउने कार्यक्रम गर्ने ।
(५) मुख्य मागहरु –
(क) प्रवासी मजदुरले स्वइच्छ्ले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गरे ।
(ख) कृषि क्षेत्रको प्रवासी मजदुरलाई भेदभाब गर्ने मजदुर कानुनको धारा ६३ खारेज गर ।
(ग) डब्लुपीएस लागु गर ।
(घ)धरपकड बन्द गरि बिना भिषा काम गरिरहेको सबै प्रवासी मजदुरलाई भिषा प्रदान गर ।
(ड.) इपिएसको मजदुरको थेजिक्गुम कोरियामा नै प्रदान गर ।
(च)खाने बस्ने खर्च सम्बन्धि निर्देशिका खारेज गर ।
(छ) प्रवासी मजदुरको मजदुर ३ अधिकार सुनिस्चित गर ।
छोटो अबधि –
– एमटियुको होमपेज बनाउने
– मजदुर संगठन, सामाजिक संगठनको केन्द्रिकृत रेल्ली ,नियमित सास्कृतिक कार्यक्रम ,सहयोग साझमा नियमित सहभागी हुने।
– सदस्यको सुची सच्याउने।
– रेल्लीमा नियमित सहयोग गर्ने बिद्यार्थी कार्यकर्ता बृद्दि गर्ने ।
– कार्यालयमा आउने सदस्य गरिने ब्यबहारमा सुधार गर्ने।
– कार्यालयमा आउने सदस्यलाई दिने पर्चा र किताब छापेर दिने।
– मजदुर संगठनले मुख्य जोड दिनु पर्ने बिषय (इस्यु)को बारेमा समाचार पत्र , एसएनएस ,कार्ट न्युज बनाई बितरण गर्ने।
– एमटियुको गतिबिधि र मुख्य समस्याको बारेमा प्रचार प्रसार तिब्र गर्ने ।
मध्य अबधि –
-सदस्यहरुलाई सकृय बनाउन रेल्ली वा अन्य गतिविधिको भिडियो बनाउने कार्यक्रम गर्ने ।
-सदस्य बृद्दी गर्ने .सउल ख्यंगी क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी सदस्य बनाउने।
-सदस्यहरुलाई सकृय बनाउन रेल्ली वा अन्य गतिविधिको भिडियो बनाउने कार्यक्रम गर्ने।
-प्रवासी मजदुर सास्कृतिक फेस्टिवल संयुक्त रुपमा तयारी गरि संचालन गर्ने ।
– कार्यकर्ता र पदाधिकारीलाई शिक्षा दिने ।
-आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने गाडीको ब्यबस्था गर्ने ।
-अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध (एक्यबद्धता) बढाउने
-मुख्य माग पुरा गराउन संसद ,श्रम बिभाग अगाडी एकल प्रदर्शन लगायतको शंघर्ष गर्ने ।
-प्रवासी मजदुरले भोगेको समस्याको विवरण तयार गर्ने ,यसबारे प्रचार गर्ने ।
-सबै देशको कार्यकता बृद्दि गर्नकोलागि बिभिन्न देशको संस्थासग बैठक बसी छलफल गर्ने कार्य शुरु गर्ने।
-नियमित रुपमा शाखाको बैठक बस्ने।
लामो अबधि –
पदाधिकारी, सदस्यको भिषा पाउनकोलागि उपायहरु खोज्ने।
-अधिराज्यको बिभिन्न क्षेत्रमा शाखा गठन।
– कोरिया आए पछी ३ दिन दिने शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुनकोलागि श्रम मन्त्रालय र एचआरडी माग गर्ने त्यसकोलागि बार्ता गर्ने योजना।
Previous १४ औ प्रवासि सस्कृतिक भ्रमण
Next शंकार भुसालको अध्यक्षता गजेदो क्षेत्रीय कमिटी गठन
NRNA:एनआरएनए एनसीसी चीनको महिला फोरम
हार्दिक समबेदना पाँचथर सेवा समाज दक्षिण कोरिया